Music farshaxanka ma tusayo? Mushkiladii loo xaliyo
> Resource > Download > farshaxanka Ma u muujisid in aad Music Library? Mushkiladii loo xaliyo
Waa caadi in dadka u nidaamka wareejiyo maktabadda music si ay nidaamka ama qalabka qalab. Laakiin bartey, inta ay socoto wareejinta, farshaxanka music laga yaabaa in la waayay oo aan ku tusi doonaa in qalabka ama ciyaartoyda qaarkood. Xaaladahaas oo kale, inta badan oo idinka mid laga yaabaa inuu seego uun la soo bandhigay farshaxanka album, ma ka icon cirro generic. Waxa aasaasiga ah in ay leeyihiin farshaxanka mar walba oo muujinaysa waa in ay Cudarada farshaxanka si ay file music si farshaxanka ee loo gudbin karaa oo ay la socdaan files music ah. Laakiin sida aan u sameyn karno si fudud? Ha welwelin. Tani waa meesha ugu Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ) yimaado caawimaad. Barnaamijkan wuxuu si toos ah u aragto farshaxanka u heesaha oo dhan ku ururinta music aad ka dibna aad Cudarada karaa farshaxanka ee kaliya click ah. Ma sugi karaa in ay isku day ah? Aan aragno Hanuuniye tallaabo-tallaabo hoos ku qoran.
1 barnaamijka dejinta maktabadda music aad
Haddii aad u maamulaan music by Lugood, barnaamijkan si toos ah iskaan doonaa maktabadda Lugood iyo dar oo dhan music si ay saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood marka laga furay.
Fiiro Gaar ah: Wixii kuwa heesaha ma abaabulay Lugood, aad u baahan tahay si ay u tagaan Music nidaam iyo jiidi folder music si ay saxaarad faylka keligaa.
2 Raadi arts u heesaha oo dhan
Tag madax ka ah barnaamijka si aad u hesho a Scan button. Markaas ka fiiri sanduuqa calaamadeeyay Search for Songs Allaha oo riix Scan badhanka si ay u bilaabaan helo arts u heesaha oo dhan.
Fiiro Gaar ah: Waa wax sahlan in la helo tus inta ay socoto iskaanka ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u hubiso sanduuqa of Search for labalaabka Songs oo guji badhanka Scan. Markaas waxaad tahay si ay u go'aamiyaan music file waa in meesha laga saaro si ay qashinka dib dhan tus ka waxaa laga helaa.
3 arts Embed in heesaha
Dooro mid ka mid ah hees iyo hubi in ay farshaxanimada khaanadda saxda ah. Markaas riix Codso badhanka hoose si Cudarada farshaxanka si ay file music si farshaxanka muujin karo meel kasta sida iPhone. Waxaa la soo jeediyay in aad doortaan dhowr heeso oo isku xigta iyo codsan waqti isku mid ah, kaas oo uu tashiilo waqtiga badan iyo tamar.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad beddesho farshaxanka si ay image kale, waxaad riixi kartaa icon Edit ku khaanadda saxda ah iyo jiidi image maxali ah si ay u meel tahay album ka si uu u badalo tahay album hadda.
Hadda shaqadaada loo qabto. Markaasay aad u hagaagsan kartaa music ah in qalab la qaadi karo si aad Korka koob bun ah si ay u bilaabaan riyaaqayaa music la arts. Waxaad sii socotay inay u jeclahay.